बिहे गरेर ल्याएको छ महिनामै ब’च्चा जन्माएर ४२ दिनमा किन गरिन् आफैंले ह’त्या श्रीमानले खोले ए’स्तो र’ह’स्य (भिडियो) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. बिहे गरेर ल्याएको छ महिनामै ब’च्चा जन्माएर ४२ दिनमा किन गरिन् आफैंले ह’त्या श्रीमानले खोले ए’स्तो र’ह’स्य (भिडियो) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
तर कास्कीमा भने १ भयंकर, अचम्म र कहा,लीलाग्दो घ,टना घटन पुगेको छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने। आफ्नो आमाले ४२ दिनकाे शिशुलाई घाँटी थिचेर ह, त्या गरेकि छिन् । पोखरामा १ दम्पती बस्ने र जसबाट मात्र १ सन्तान , जो ४२ दिन मात्र भएको थियाे। श्रीमान ज्याला मजदुर गरेर गुजारा गर्ने गर्दथे। तर ति श्रीमान लाई नै नसोचेको घटना अाई लागेको छ । जब म बिहानको खाना खाएर, काममा जाने बेला सम्म सबै ठिक र राम्रो थियाे तर म गए पछी भने सबै घ ट ना भएछ।
उक्त दिन भने श्रीमानले आफ्नो श्रीमती लाई बच्चा सानो छ आफ्नो र रुम पनि सफा गर्नु नत्र कोरोना के के रोगहरु लाग्ने मात्र भनेको उनके बताए । अरु धेरै हामी बीच कुनै कुरा भएन । तर के कारणले आफ्नो सन्तानको लागि आफ्नो आमा नै शै;तान बनेर अाईन, सम्झदा पनि म न दु ख्ने गर्दछ । यस्तो आमा हुनु बुन्दा त ठु हुराे हुनु धेरै जाति उनले थपे।
उनी आफैँले बच्चाको हत्या गरी बाहिर निस्किएर बाबु बाबु भन्दै चिच्याएको बताएका छन् वरिपरि सुन्ने छिमेकीहरुले आखिर किन गरिन् त तेस्तो?अब बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला:
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 12, 2021 April 12, 2021 76 Viewed